Burjika Xiddigta: astaamaha, sida loo raadiyo iyo quraafaadka | Saadaasha Shabakadda
oo dhan xiddigaha cirka ayay ku leeyihiin macno iyo asal. Maanta waxaan ka hadli doonaa xiddigta pisces kuwaas oo loo tixgeliyo saddex iyo tobnaad iyo ugu dambayn dhammaan xiddigooyinka xiddigiska. Waxaa sidoo kale loo yaqaan magaca kalluunka oo matalaya qulqulka biyaha. Ma aha koox xiddig ah oo ay fududahay in laga helo kuwa aan khubarada ku ahayn indha indheynta. Kaliya mid ka mid ah xiddigihiisa waaweyn ayaa ka hooseeya cabbirka 4 inkasta oo uu aad u ballaaran yahay.
Qormadan waxaan ku baranaynaa dhammaan astaamaha, asalka, quraafaadka iyo sida loo aqoonsado xiddigta Kalluunka.
2 U fiirsashada xiddigta Pisces
3 Khuraafaadka xiddigta Pisces
4 Xiddigaha waaweyn
Burcadda Pisces waa la arki karaa marka ay korantada iyo dhulbaraha cirku is dhex galaan. Tani waxay dhacdaa inta lagu jiro xilliga guga barta ay ka gudbaanna waxaa loo yaqaanaa barta vernal ama dhibic isku mid ah. Xiddiga ugu weyn ee kooxdu waa α Piscium, oo sidoo kale loo yaqaan magacyada Alrisha ama Alrischa.
Waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah xiddigaha ugu waa weyn xiddigta dhexdeeda. In kasta oo ay weyn tahay, haddana ma sahlana in la fiirsado. Meelaha magaalooyinka ah halka ay ku yaalliin wasakheynta iftiinka way ku sii adkaaneysaa in la arko kooxdan. Xiddiga ugu ifaya wuxuu leeyahay cabir dhan 3.5. Kuwa indha indheeya xiddigani waxay adeegsan karaan xiddigta Pegasus si loo ogaado. Xiddigtaas waxaa loo yaqaan 'Triangle Autumn'. Waxay kaa caawinaysaa inaad awood u yeelato inaad aqoonsato xiddigta Kaluunka.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo asalkiisa ah, in kastoo dhammaantood ay leeyihiin cunsur aad u caan ah. Asalkani waa inuu leeyahay laba kalluun. Xisaabaadka badankood asalka xiddigani waxay ka yimaadeen hal-ku-dhigga Giriigga iyo quraafaadkii Roomaaniga.
Sida xiddigaha xiddigaha Aquarius iyo Capricorn, waxaa laga helaa aag cirka ka mid ah oo ku xeeran xiddigo kale oo biyo ku jira. sida ay tahay "badda" ama "biyaha." Magaca xiddigani wuxuu ka yimid Latin oo macnaheedu yahay "kalluun". Magacani waa iska cad sababo la mid ah muuqaalka kalluunka. Haddaad si dhow u fiirsato waxaad arki kartaa sida ay u eg yihiin laba kalluun oo xadhig isku laaban.
U fiirsashada xiddigta Pisces
Waa xiddig soo baxday oo cirka ka muuqata kana mid ah xiddigta xiddigiska. Waxaa la arki karaa laga bilaabo Febraayo 22 illaa 21 Maarso. Tan waxaa dib loo habeeyay sanadaha qaar hada oo ay ku salaysnayd kalandarka Baabiloon. Tani waxay ka dhigeysaa taariikhaha hadda jira in calaamaddan xiddigiska loo arki karo inay u dhexeyso Maarso 12 iyo Abriil 18.
Hadaan falanqeyno dhammaan xiddigiyada xiddigiska ee ku sugan "badda" aad bey u ballaaran yihiin. Intooda badan intooda badani aad bay u jilicsan yihiin, sida kiiska xiddigani yahay. Xaqiiqda ah inay leedahay xiddigo daciif ah ayaa ka mid ah arrimaha ka dhigaya xiddig aad u adag in lagu kala saaro isha qaawan. Waxaad badanaa ka arki kartaa xilliga dayrta koonfurta iyo guga waqooyiga. Taariikhda aan kor ku soo xusnay waxaa loogu talagalay Waqooyiga Caalamka. Haddii aad ku sugan tahay cirifka koonfureed waa inaad sugto xilliga dayrta.
Si loo helo, waa inaad tixgelisaa waxyaabaha qaarkood. Midka koowaad waa in la raadiyo kuwa ugu iftiinka badan xiddigaha ee u dhow qaybaha waaweyn ee isla. Taasi waa, labada xiddig ee ugu ifaya kuwa ugu badan waa kuwa madaxa kalluunka iyo kan xarigga. Si aad u hesho kalluunka woqooyi u dabaasha, waa inaad marka hore raadisaa xiddigta Pegasus, maadaama ay fududahay. Xiddigtaani waxay ku taal koonfurta tan. Waxaan ka heli karnaa xiddigta Markab. Sidan oo kale, waxaan ku lafaguri doonnaa madaxa u baxa koonfurta una dhow xiddigta Andromeda. Koorsadu waa xiddiga laba-geesoodka ah ee Alrisha oo ah kan ugu dhalaalaya uguna fudud in la aqoonsado.
Waxay badanaa ka kooban tahay laba shay oo qoto dheer. Labadan shay waa galaas wareegga M74, iyo NGC 520 oo ay sameeyeen laba galaxyo oo isku dhaca. Marka laga hadlayo dhammaan xiddigaha iyo xiddigaha xadka u leh xiddigta Pisces waxaan arki karnaa kuwan soo socda: xagga galbeed waa xiddigta Aries, oo ah xiddigta koowaad ee burji. Waqooyiga waxaan leenahay xiddigta Pegasus, Andromeda iyo saddexagalka. Ugu dambeyntiina, koonfurta waxaan ka helnaa xiddigta Cetus.
Khuraafaadka xiddigta Pisces
Quraafaadka Giriiggu waa waxa keenay noocan xiddigta. Waxaa looyaqaanaa quraafaad Pisces. Sidoo kale waa in la sheegaa in dhaqanka Roomaanku uu xiriir la lahaa asalka iyo macnaha khuraafaadkan. Waxaa jira waxyaabo gaar ah oo astaan ​​u ah dhaqanka reer Baabil tan iyo tan Waa mid ka mid ah 44 xiddigood ee ugu horreeya ee dhaqankan matala.
Waxaa jira khuraafaad Eratosthenes ah oo sheegaya in asalka Pisces uu ahaa ilaahadda Derceto. Derceto waxay ahayd gabadhii Aphrodite. Waxaa loo malaynayaa inay tahay meeris ama waxa ugu dhaw iyada maadaama ay ka koobnayd haweeney badhkeed dhexda iyo badhna dhexda. Waxa ugu weyn ee ay ku kala duwan yihiin meerisyada aan maanta ku haysanno khuraafaadka ayaa ah inay lahayd laba lugood.
Khuraafaadkan ayaa sheegay in habeen Derceto ah uu ag joogay hareeraha biyaha oo uu ku dhacay. In kasta oo ay lahaayeen meydka meeraha, haddana ma ay dabaalan karin kamana bixi karin biyaha kaligeed. Kalluun weyn ayaa awooday inuu badbaadiyo iyada waana halka ay ku dhalatay asalka sumadda Pisces. Waxay ku saabsan tahay laba qof oo midoobay xilligii samatabbixinta. Waxaa macquul ah in sawirkani uusan sifiican ugu muuqan xiddigta Pisces, tan iyo markii loo maleynayo in Pérez laftiisa oo badbaadiyay nolosha uu ahaa midka dhaliyay kooxdiisa.
Ugu dambayntii waxaan soo qaadan doonnaa kuwaas oo ah xiddigaha ugu waaweyn xiddigtaas. Waxaan horey u soo sheegnay inay yihiin Alrisha ama Alrischa (α Piscium) iyo Fum al Samaka (β Piscium). Si kastaba ha noqotee, in kasta oo ay jiraan xiddigo kale oo dhalaalaya, haddana iyagana waa muhiim. Midka ugu ifaya waa Kullat Nunu. Magaca Alrisha wuxuu ka yimid Carabiga oo waxaa loola jeedaa xarigga. Magaca oo si fiican loogu muujiyey booskiisa xiddigta dhexdeeda waana midka tilmaamaya guntiga u dhexeeya labada xadhig gaar ahaan.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto koox-kooxeed Pisces.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Burcad badeedka